Xisbi ka jira Finland oo ka hor yimid Soomaalida la siiyo Baasaboorka dalkaasi – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Xisbi ka jira Finland oo ka hor yimid Soomaalida la siiyo Baasaboorka dalkaasi
Hoggaamiyaha Xisbiga Finns Party,Jussi Halla-aho ayaa sheegay in Shisheeyaha la siiyo Basaaboorka Finland uu 6 jeer ka badan yahay intii la bixiyey sannadihii 90-aadkii iyo inay inta badan dadka cusub ee la siiyey yihiin Muwaadiniin Labo Dhalasho haysato.
Waxa uu intaasi ku daray in 20-aadkii sanno ee la soo dhaafay, tirada Muwadainiinta cusub ee Finlad ahaayeen kuwo aad u saare ugu kacay, iyadoo sannad kasta 2,000 oo qof herli jireen Dhalashadda Finland sannadihii 1990-aadkii, halka ay sannadkii hor ee 2017-kii ay heeleen 12,000 oo qof.
Hoggaamiyaha Xisbiga Finns Party oo la hadlay WargeyskaHufvudstadsbladet waxa uu tilmaamay in dadka Soomaalidai yo kuwa Ciraaqiyiinta yihiin kuwa sida xad-dhaafka u helay Dhalashadda dalka Finland, wuxuuna ku baaqay in la adkeeyo Sharciga Muhaajiriinta iyo Siyaasadda Muwaadinnimadda ee dalkaasi, waa sida uu hadalka u yiri.
Waxa uu intaasi ku daray haddi Shisheeyaha degdeg u helaan Dhalashadda dalka Finland inay taasi caqabad ku noqon karto sidii loo kormeeri lahaa hannaanka ay u socdaan tisqaadka arrimahaasi
“Soomaalida iyo Ciraaqiyiintu yihiin kuwa ugu badan ee aan waxtarka u lahayn Finlad, haddii uu qof eego Shaxda Shaqooyinka. Xaqiiq ahaan waxay iyagu ka mid yihiin kuwa hela Dhalashadda dalkaasi, waa arrin aad looga walaaco” ayuu yiri Hoggaamiyaha Xisbiga Finns Party.
Dhinaca kale, waxa uu walaac ka muujiyey inay dhowr qof shisheeye haysta Dhalashadda Finland ka mid yihiin Dembiilayaasha Caalamiga ee lala xiriirinayo Falalka Argagixisadda, wuxuuna intaasi ku daray inay taasi ku daray inay taasi hoos u dhigi karto Kalsoonida lagu qabo Baasaboorka Finland iyo inay dalka soo galaan dadka Khatarta ah.
Si kastaba ha ahaatee. Tirada ugu bdan Shisheeyaha ku nool dalka Finland ee haysta Baasaboorka dalkaasi waxay ka soo kala jeedaan Raashiyaan, Soomaalida, Ciraaaqiyiinta iyo kuwaEstonians.
Sawirro:-Mid ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ugu Caansan Somaliland oo Calan Cad kala degay Garoowe
DEG DEG:-Kolonyo ay la socdeen Ciidanka Kenya oo qarax lala eegtay